श्रमिक भन्छन्- सरकार अरुले बाँडेको खानाले कतिदिन बाँच्ने ?- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २३, २०७७ दिपेन्द्र रोक्का
काठमाडौँ — पाँच दिनदेखि ८ वर्षको छोरो लिएर सन्तोष बस्नेत कान्ति अस्पताल नजिकै रोयल कोल्याब्रेटिभ नामक संस्थाले चलाएको निःशुल्क खाना खुवाउने ठाउँमा धाइरहेका छन् । पेसाले उनी ज्यामी हुन् । कोभिड १९ को महामारीका कारण सरकार लगाएको निषेधाज्ञाले उनले ज्यामी काम गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले घरमा स्टोभ बल्न सकेको छैन । दिनभरी ज्यालामजदुरी गरेर बिहानबेलुकी छाक टार्ने सन्तोष पहिलाको लकडाउन र अहिलेको निषेधाज्ञले असन्तोष बन्न पुगेका छन् । कोरोनाको कत्ति डर छैन उनलाई जति भोकको छ । काम नभएर मन बेचैन त छ नै उनको अर्कोतिर श्रीमतीको खुट्टा भाँचिएर तनाव थपिएको छ । 'बिहान खायो बेलुका छैन, बेलुका खायो बिहान छैन,' उनी दुःख सुनाउँछन्, 'हाम्रो पीडा सुन्ने र बुझिदिने कसले ? यसरी अरुले बाँडेको खानाले कतिसमय बाँच्ने ?'
यस्तै मारमा परेका मजदुरहरुलाई रोयल कोल्याब्रेटिभ नामक संस्थाले विगत ८ दिनदेखि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा खाना खुवाइरहेको छ । सोमबार बिहानै कान्ति अस्पताल क्षेत्र नजिकैको सानो कोठामा केही युवाहरु ठूलो भाँडामा खान्की तयार गर्दै थिए । कोही भात पकाउन त, कोही तरकारी काट्न व्यस्त ।त्यतिकैमा केही मजदुरहरु सटर बाहिर आएर भेला भए । भित्रबाट 'एकछिन् नजिकै बस्नुस्' भन्ने आवाज सुनेपछि उनीहरु छेउकै खाली ठाउँमा खाना कुरेर बसे ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७७ १८:०८